Email-lo la Jabsaday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Email-lo la Jabsaday
La cusbooneeyay onsdag 26 oktober 2011 kl 13.00
La daabacay onsdag 26 oktober 2011 kl 11.52
Ma ahan email-llada la jabsadey kuwa bogga internetka ee bloggtoppen.se oo keliya, sidoo kale waxaa iyagana la jabsadey oo kale 75 bog ee uuna ka mid yahay bogga internetka ee war-geeyska aftonbladet. Waxaa la qiyaasayaa illa iyo hadda in 180 000 oo ruux laga jabsaday/xaday summadihii ey ku geli jireen qaanadahooda, kuwaasina oo isugu jira shakhsiyaad bulshada caadiga ka mid ah, siyaasiyiin iyo suxufiyiin.
Sida amuurtani ku dhacday ayaa la xiriirta qaabka ammaan khaanadaha internetka oo aan sugneeyn, sida ay sheegtay Anne-Marie Eklund Löwinder , ahna madaxa laanta ammaanka ee ururka sama-falka qaabka bogagga internetka:
- Waxaa dhici karta in ammaandarradu ugu wacnaan karto hor-u-marinta adeegyada noocaaniya. Iyo dhaqdhaqaayada ruuxu sameeyo si uu email-lo u jabsado?
- Howllo sidaa u badan uma uu baahna.
War-geeysyada Expressen iyo Aftonbladet oo weriyeyaal ka howl-gala la jabsaday khaanadahooda ayaa dacwad ka dhan ah ciddii falkaa ku dhaqaaqday u gudbiyey ciidanka ammaanka ee boliiska. Lamana ogsoona illaa iyo hadda marka laga reebo cidda falkaa ku dhaqaaqday cid aan ahayn sababta ay falkaa u sameeysay iyo waxa ka dambeeyay. Iyadoona su’aasha maanta la is-weeydiinayaa tahay heerka ammaanka ee war-geeysyada. Miyeeyse suurtagal tahay in cid war-geeysyada war qarsoodiya u gudbisay halkaa laga ogaado. Jan Helin, ahna tifatiraha war-geeyska Aftonbladet ayaa su’shaa sidan uga jawaabay:
- Waa mid la oran karo xaalad halis ah. Waxey kaloo muujineeysaa laba arrimmood, midda koowaad in ammaanka bogagga internetka la sugo iyo in lagu sugan yahay xaalad war-baahin ee cusub.
- Arrinkani maaha oo keliya mid u khaas ah war-geeyska Aftonbladet. Waa caqabad hore ula soo gudboonaatay war-geeyso iyo hayado warar ee kala duwan. Islamarkaana aniga oo rajaynaya in bulshadu nagu aamin qabi karto in ciddii nala soo xiriirtaa dareemi karto iney astaantoodu ahaato mid qarsoodiya haddii ay middaa doonayaan. Mana ahan mid laga ogaan karo ama lagala soo bixi karo daaqadda dambe.
Waxaa jira cawaaqib badan ee la xiriira ammaanka internetka, iyadoona dadka qaarkii qabaan in nidaamka ammaanku yahay mid soo-yaal ah, islamarkaana aad uga dib-dhacay hor-u-marka ay tiknikadu hiigsaneeyso, sida uu u sheegay idaacadda la iska daawado ee SVT Fredrik Klasén, kuna howl-gala ilaalinta ammaanka internetka.
Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in bulshaduna garwaaqsato arrinkaa, sida ay sheegtay Marie Eklund Löwinder:
- Waxaa loo baahan yahay si aan khaanaddaada lagu jabsan summad dheer ee aad ku gasho, ugu yaraan ka kooban sagaal summadood iyadoona la isku qaso xuruufo waaweyn, kuwo yaryar iyo wixii la mid ah.
Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Stiftelsen för internetinfrastruktur.